это не просто кинотеатры. IMAX - akusiwona nje amabhayisikobho. Bayisibonelo izikrini enkulu ngempela ukuthi ukukhulisa ukuzigcina umbukeli ku-movie. Kule minyaka engu-7 IMAX amahholo uvele yonke imizi emikhulu emhlabeni wonke, futhi uthole ukuhlolwa movie, abantu bazimisele ukuba bame amahora ethubeni amathikithi. Ake sithole ukuthi kwakungani lapho enkulu cinema isikrini eMoscow futhi kungani umbukeli ngamunye ukulungele ukukhokha kathathu inani oyedwa ifilimu.
Kuyini IMAX: Common Izinganekwane
это компания, которая выпускает уникальные полномасштабные проекторы. Okokuqala, IMAX - inkampani ekhiqiza full-scale namaphrojektha esiyingqayizivele. Ngokuvamile, zidinga isikhala esikhulu, ngakho zokubukela enjalo angase afinyelele 30 metres ubude.
Okwesibili, akusiyo amatiyetha 3D-movie, lapho ukubukela ibhayisikobho, izibuko ezikhethekile, ebhapathiza umbukeli emkhathini ngakuthathu.
это высокое разрешение изображений и максимально качественный звук. Izinzuzo main ukuthi baletha inkampani esikhundleni ehamba phambili phakathi projection zokukhiqiza, - a lesinqumo high izithombe kanye ephezulu yomsindo.
Umhlangano omkhulu kunayo yonke isikrini IMAX eMoscow
это прогрессирующий город-миллионник, который использует только лучшие технологии. Moscow - yidolobha okuqhubekayo yisigidi, okuyinto kuphela isebenzisa ubuchwepheshe best. IMAX-zokubukela nabo bayajabula. Где располагается самый большой экран кинотеатра в Москве и как до него добраться? Abaningi ifilimu abathanda esiyicelayo, "Uphi enkulu cinema isikrini eMoscow nokuthi ungafinyelela kanjani kulo? . ". Sizokusiza ukuthi ukuphendula lo mbuzo.
isihlale iminyaka engaphezu kwemihlanu elikhulu ihholo IMAX Itholakala yezitolo "Capitol". Lapho, izibukeli ziyithole cinema Nescafe-IMAX c ikamelo elikhulu kangangokuthi wayengasaboni ekuphakameni ingafaniswa isakhiwo eziyisikhombisa storey. Naphezu kweqiniso lokuthi IMAX-Igumbi akulona esikhulu kunazo zonke eRussia, lapho ngo-100% obhapathiza umbukeli ku ifilimu.
Ikheli ebhayisikobho screen ngobukhulu e Moscow
Ukuze singene IMAX Hall, izakhamuzi nezivakashi ukuvakashela enyakatho ntshonalanga okuyingxenye. Shopping centre, lapho kukhona isihenqo esikhulu elise emgwaqweni Right Bank, indlu 1B. I enkundleni edumile yemidlalo yaseshashalazini zingatholakala esitezi sesithathu. Ukuze labo abaqondiswa kahle emzini, udinga ukuya "Glider" metro station.
Njengoba IMAX - kwekulu cinema isikrini e Moscow, lapho show uya abantu abangaphezu kuka-200 njalo ngehora, isetshenziselwa nezingxoxo. Kweminyaka ecishe ibe mithathu ilandelana kule "Capitol" yezitolo izikhungo aphethe seminar kubafundi, ngubani ongakwazi ukubuka ukuqeqeshwa amavidiyo ngokuchaza okuphezulu.
Izinzuzo esemqoka ebhayisikobho
Umhlangano omkhulu kunayo yonke isikrini IMAX yamabhayisikobho eMoscow idume hhayi kuphela isixazululo yaso ephezulu, kodwa futhi umlando. Lokhu kungenxa yokuthi ekuqaleni IMAX-namaphrojektha zenzelwe abantu abathandana ngempela futhi sazise izinga ebhayisikobho. I Abadali IMAX wafuna (futhi namanje bafuna) ukudala ukucwiliswa esiphezulu kule filimu.
Image kucacile, ngaphandle "cubes" ezibonisa izinga abampofu.
Bright isithombe okungahambisani nzima amehlo akho.
100% ukucwiliswa in lithathelwe. Lokhu kungenxa yokuthi umbukeli abanakukubheka esembozweni sawo wonke onqenqemeni kwesikrini, ngakho ubuchopho ubona isithombe njengento engokoqobo, futhi umuntu uzizwa khona yayo ifilimu.
Amakhamera ngoba izikrini elikhulu
это дорогое удовольствие для настоящих режиссеров (стоимость одного аппарата достигает 40 000 000 долларов). High-isixazululo ikhamera - kuyabiza ngoba abaqondisi yangempela (izindleko eyodwa unit kufinyelela 40 million US dollars). Le nkampani inyathelisa amakhamera engaphezu kwengu-30, ngakho-ke linomlando othakazelisayo. Ngokwesibonelo, umshini wobuchwepheshe is hhayi nje uya kwi-space, ukuze umhlaba wabona okufana ezidumile ngokuthi "i-Hubble" ku-3D. Ngenxa ubuchwepheshe ekuhleleka kwesinema esiyingqayizivele, izwe eseliye labhekana nalo movie ethandwa Kristofera Nolana "Interstellar" futhi "Batman." 15 минут едва ли хватает одной катушки. Isici esiyinhloko nokuba yinkimbinkimbi idivayisi ikhamera Kuphendula 36 ngesekhondi, ngakho 10 - 15 imizuzu neze ngokwanele ikhoyili enjani umuntu.
Ukuba yinkimbinkimbi kwayo umbukiso esikrinini esikhulu
I enkulu cinema isikrini eMoscow iyathandwa lesinqumo high hhayi kuphela. Lokhu kungenxa yokuthi ikhwalithi yesithombe is edingekayo elihambisana wokudlala ezingaba ngokunembile ukuwudlulisela kwe-pixel ngayinye esithombeni. Isebenzisa idivayisi eyinkimbinkimbi ifakwe chip micromirror. Le nkampani iye yasungula iminyaka engaphezu kwengu-30 futhi uye wachitha on ukuthuthukisa abacishe babe izigidi ezingu-70 zamaRandi. Ukuze esilinganayo yakwazi ukwakha an amazing, ngoba namaphrojektha anemisila chips adlulisa Ngokuphambene, isithombe esicacile 'iyezwakala. Ngo inqubo ukuthuthukiswa kwe-chips ngokuvamile usha, hhayi withstanding voltage namaphrojektha. Futhi ukuthandwa izikrini ukuthi namaphrojektha kungadla okungenani 5 izigidi zamaRandi, futhi kuphela zokubukela amabhayisikobho engcono kungaba ukukhokhela okunethezeka enjalo.
Bewazi yini ukuthi ...
IMAX amatiyetha kukhona ethandwa kakhulu emhlabeni.
Inkampani ifilimu, ngaphambi kokukhipha ukuqashwa kwe-movie, uhlole ukuthi umsindo kwaba lihlanzekile ngokuphelele futhi nazo zonke nemingcele. Ngenxa yale njongo, uchwepheshe yokuqopha, lapho inqwaba ochwepheshe silitadisha ngokucophelela ithrekhi futhi ngasinye ehlukile umsindo ifilimu. format umsindo kufanele baphile ngokuvumelana nezimfuneko lenkampani 100%.
High-isixazululo amakhamera avame ukusetshenziswa ukuqopha emadokhumenthari, ngakho avame bacwilisa emanzini, ukukhuphuka izintaba wathumela emkhathini.
Intengo elilodwa yemidlalo cinema ruble 600-1000. Naphezu kweqiniso lokuthi i esilinganayo umuntu Ungabheka cishe 8 yobude obugcwele amafilimu, wayesalokhu ekhetha izinga IMAX. Isizathu esiyinhloko - kungcono emkhathini nemizwelo ungathola ngibukele ibhayisikobho. Dive, okuyinto usinikeza isikrini ayikwazi kuqhathaniswa lutho.
"Hlangana Joe Black": nabalingisi, izinhlamvu, umbono movie
Cleo Pires, Brazilian superstar ifilimu nethelevishini actress lezinceku
Kungani iphupho bedukile? encwadini iphupho ukutolika
Ufa, lokuhlala "Dubrava": ukubuyekezwa, indawo